Efuna Ukuba Ngenye Yezindawo Eziningi Ezizayo Ezwe, Dubai
Efuna Ukuba Ngenye Yezindawo Eziningi Kakhulu Ezizayo Emhlabeni
Ama-Platforms Ayishumi Ethandwa kakhulu e-Job e Dubai
Kwangathi 22, 2019
Yini okufanele uyenze e Dubai?
Kwangathi 24, 2019
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 22, 2019
Noma yikuphi ukuhlelela ikusasa kungaba yinqubo yezobuchwepheshe nokuphatha othinteka enhlalakahleni yabantu, ukuphathwa kokusetshenziswa komhlaba, ukuklanywa kwemvelo yasemadolobheni kufaka phakathi amanethiwekhi okuhamba nawokuxhumana, nokuvikelwa kanye nokwenziwa ngcono kwemvelo yemvelo nokunikeza ithuba langempela lokudlala indima ebalulekile ekwakheni izindawo nezindawo emhlabeni wonke.
Kubalulekile ukwazi lokho amanye amazwe emhlabeni wonke aseqalile ukwenza amacebo ukwakha amadolobha ahlakaniphile angasebenzisa ubuchwepheshe ukusiza ukudala izinsiza Ukuhlanganiswa kokuguqulwa kube yimpilo engcono imvelo emhlabeni, ukuthuthukisa kanye nokwenza ngcono izinga lokuphila kwalo ngekusasa ngemizamo ukuba nemizi yayo yenza idatha yabo yezibalo itholakale ku-inthanethi ngaphandle kokuhlupheka.
Iyini idolobha elihlakaniphile?
Amadolobha ama-Smart angasebenzisa ubuchwepheshe bokuhlelela phambili ukusiza ukusiza ukudala izimo ezinhle zokuphila py izifiso zokwakha nobuchwepheshe, njengoba ucwaningo luqhubeka mayelana namanzi, ezokuhamba, indwangu yedolobha, nemvelo yasolwandle konke ngombono wokwenza idorobho lihle maduze nje. Ngokukhuthaza ukwahlukahlukana, izici zokwakha, nobuciko obukhulayo bokuthi abantu abavela ezizindeni ezihlukene bahlangane edolobheni namasiko abo azohlangana kahle. Futhi, izici zokwakha zedolobha zizoqala futhi thuthukisa ukwedlula noma ikuphi emhlabeni.
Credit: Smart Dubai https://2021.smartdubai.ae/
Yonke indlu ukufaka uhlelo lwe-telepresence oluzosetshenziselwa ukunikeza i-video conferencing futhi iphinde ithumele ulwazi kubahlali bomuzi, ikhaya ukuze okungenani libe nerobhothi ekugcineni 2020, indawo yokusebenza lapho ubuchwepheshe bungasiza khona idolobha ukuba liqaphele futhi lilungiselele lapho kwenzeka inhlekelele yemvelo. Hhayi lokho kuphela, kepha uhlelo luzobuye lubikezele ngesimo sezulu, isikhukhula, kanye nezinye izinhlekelele zemvelo ngisho nezinsuku ezandulela isikhathi.
Isu se-Smart City
Ukufinyelela Kuzinze amathemba ebhizinisi, lapho kuzoba khona nezinhlelo zokuphepha ezanele ' phambilicities.com, nohulumeni bangaphumelela ngokufaka i-Audio Visual Display eHhovisi Elikhulu elingasetshenziselwa ukuthola nokwazi ikhwalithi yomoya kanye nokubheka izinga lezokuthutha edolobheni, ukuze ekhula ngokushesha emhlabeni ngensimbi yengcebo ekhula ngokushesha kakhulu, iba ngomunye wabaphambili bezobuchwepheshe emhlabeni, i-zero-carbon esimeme idolobha elingenawo umhlangano nentuthuko kwezobuchwepheshe, architecture and transportation of the future through flying izimoto
I-Wi-Fi yamahhala kanye nemigomo eqinile ekuhlelweni kwezakhiwo nokongiwa kwamandla, ukuba ngumuzi owakhiwe wokuncika kumandla elanga nezinsizakusebenza ezingavuselelwa, ukuqina kokuguquguquka kwesimo sezulu ngokusebenzisa i-IT ukulandelela ukuphuma kwegreenhouse futhi kubuye futhi kuveze ezinye izindaba zemvelo ezinjengezidingo zohlelo lokuhambisa indle kanye nokunakekela.
Futhi ngale kusasa elizayo elihle, kusungulwe into yakamuva- into ephilayo yenziwe kusetshenziswa i-DNA eyenziwe ngabantu ngokuphelele. Kuyisinyathelo esibalulekile semvelo yokwenziwa nososayensi ukudala i-genome yokwenziwa amahlandla amane likhulu futhi liyinkimbinkimbi kakhulu kunanoma yimaphi ama-genomes ababekade bewasungula ngaphambili.—HyperBola
Smart cities such as Dubai and Abu Dhabi ukushaya umbono we-United Arab Emirates ngekusasa. Ngakho-ke, isu laseDubai eliyindawo ephakeme ye-Smart City liguqula indlela abahlali bayo futhi izivakashi zihlala, zisebenze futhi udlale. I-Dubai ngakolunye uhlangothi, ihlose ukuba omunye wemadolobha amakhulu kakhulu e-The World by 2021.
We are now providing good iziqondiso Kwezokuqashwa eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu Imisebenzi e-Dubai Guides. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.